(DAAWO SAWIRADDA). Ciiddamadda Somalia oo ay Saraakiisha Ururka Midowga Europe tababarayaan – idalenews.com
Ururka Midowga Europe, ayaa dhawaan shaaciyey inay xilli-kordhin ku sameeyeen Mashruuca ay Ciiddamadda Dowladda u tababarayaan.
Hadal ka soo baxay Xarunta Ururka EU-da ee Burussels, ayaa lagu sheegay inay isku raaceen inuu Mashruucaasi sii socdo tan iyo sannadka 2015-ka, iyadoo Mashruucaasi loo qoondeeyey lacag dhan 11,.6 million oo Euro.
Saraakiisha Tababarka ee ka hawlgasha Mashruuca EU-da ee tababarka Ciiddamadda Somalia “The European Union Training Mission (EUTM) ayaa waxay xaqiijiyeen inay Ciiddamadda Soomaalida ee ay tababarka siinayaan yihiin kuwo kaalin wax-ku-ool ah ka qaatay sidii Maleeshiyadda Alshabaab looga saari lahaa magaalladda Muqdisho iyo Goballadda kale ee laga xoreeyey.
Ciiddamadda Dowladda ayaa waxaa lagu soo tababaraa Xeradda Tababarka ee Bihanga (Bihanga Army Training Camp) oo 368 Km dhinaca Galbeed kaga toosan Caasimadda dalka Uganda ee Kampala.
550 Askari ayaa halkii tababar loo qaadaa, kuwaasi oo muddo 7 bilood loo soo carbiyo Hawlgalladda Milliteriga, Anshaxa iyo Dagaalka Jabhadaynta si ay Kooxda Alshabaab uga hortagaan.
In ka badan 3,000 Askari oo ka tirsan Ciiddamadda Dowladda Somalia ayaa loo soo tababary, iyadoo la sheego inay 5% ciiddamdaasi u goosteen dhinaca Alshabaab, kuwaasi oo xeeladihii la soo baray ku sii tababara Maleeshiyada ay ka barbar dagaalamaan.
Dowladda Uganda oo hadal ka soo saartay Qorshaha EUTM eeTababarka Milliteriga Somalia looga wareejiyey dalkeeda